Faah Faahin:- Weerarkii Saaka Ka Dhacay Degmada Shibis Ee Magaalada Muqdisho (Sawirro) – Goobjoog News
Faah faahin dheeraad ah ayaa laga helayaa weerar Ismiidaamin ah oo Xarakada Al-shabaab ka geysteen meel ku dhaw xarun ay degan yihiin ciidamada dowladda Federaalka Soomaaliya oo ku taal degmada Shibis ee magaalada Muqdisho.
Wasaaradda amniga gudaha ayaa ka hadashay weerarkaasi waxaana ay sheegtay in ciidamada amniga ay fashiliyeen weerarkaan.
Afhayeenka wasaaradaasi Maxamed Yuusuf oo warbaahinta la hadlay waxa uu sheegay in la toogtay seddax ruux oo ka tirsan Al-shabaab kuwaasi oo weerarka soo qaaday, mid ka mid ah waxa uu saarnaa gaariga is qarxiyay, halka Labada kale uu sheegay in lagu dhex toogtay guri dad shacab deganaa oo ay galeen.
Goobta weerarkaan ka dhacay ayaa aad ugu dhaw Iskuulka Shibis, gaar ahaan nawaaxiga Maxfalka oo kaabiga ku haya xarunta degmada Shibis, waxaana jirta waxyeelo soo gaartay dad shacab ah, inkastoo tirada dadka shacabka ah aan la sheegin.
Waxaa lasoo bandhigay Meydadka Laba nin oo xiran dareeska ciidanka Milatariga, kuwaasi oo la sheegay in ay ahaayeen rag damacsanaa in weerarka qaraxa ah ka dib ay gudaha u galaan halka ay ciidanka degan yihiin.
Afhayeenka ciidamada Al-shabaab Cabdicasiis Abuu Muscab oo u waramay Wakaaladda Reuters waxa uu sheegay in weerarkaasi iyagu ay ka dambeeyeen, islamarkaana bartilmaameed uu u ahaa sida uu sheegay dhisme ay ku tababartaan ciidamada Nabad sugidda Qaranka.
Xaaladda guud halkii saaka ay wax ka dhaceen haatan waa mid degan, waxaana goobta gaaray saraakiil ciidan, iyadoo la baarayo qaabka ay wax u dhaceen.